Shina sy mpamokatra ranon-dranomandry mamonjy herinaratra any Shina | Chemequip
Slurry Ice machine system dia mamokatra ny ranomandry slurry, antsoina koa hoe ranomandry ranoka, ranomandry mikoriana ary ranomandry ranoka, tsy mitovy amin'ny teknolojia mangatsiaka hafa izany. Rehefa ampiharina amin'ny fikirakirana ny vokatra sy ny fampangatsiahana dia afaka mitazona ny fihavanan'ny vokatra mandritra ny fotoana lava kokoa izy io, satria kely sy malefaka ary boribory lavalava ny kristaly ranomandry. Miditra isaky ny zoro sy triatra amin'ny vokatra izay mila mangatsiaka izy. Izy io dia manala ny hafanana amin'ny vokatra amin'ny taha ambony kokoa noho ny ranomandry hafa. Izany dia miteraka fandefasana hafanana haingam-pandeha indrindra, fanamafisana ny vokatra eo noho eo sy fanamiana, hisorohana ny mety hanimba ny fananganana bakteria, ny fihetsiky ny anzima ary ny fiovan'ny tarehy.
Seranan-tsambo: Seranan-tsambo Shanghai
Inona no masinina ranomandry slurry?
Ny rafitra milina Slurry Ice dia mamokatra ny ranomandry slurry, antsoina koa hoe ranomandry mikoriana sy ranomandry ranoka. Rehefa ampiharina amin'ny fikirakirana ny vokatra sy ny fampangatsiahana dia afaka mitazona ny fihavanan'ny vokatra mandritra ny fotoana lava kokoa izy io, satria kely sy malefaka ary boribory lavalava ny kristaly ranomandry. Miditra isaky ny zoro sy triatra amin'ny vokatra izay mila mangatsiaka izy. Izy io dia manala ny hafanana amin'ny vokatra amin'ny taha ambony kokoa noho ny ranomandry hafa. Izany dia miteraka fandefasana hafanana haingam-pandeha indrindra, fanamafisana ny vokatra eo noho eo sy fanamiana, hisorohana ny mety hanimba ny fananganana bakteria, ny fihetsiky ny anzima ary ny fiovan'ny volony.
Ahoana ny masinin-dranomandry slurry miasa?
Ao amin'ny masinin-tsolika bubonay, ny vahaolana voatahiry ao anaty tanky dia miditra ao an-tampon'ny mpamokatra ranomandry slurry ary ny gravitika dia mivoaka amin'ny sisin'ny fantsona. Ny vata fampangatsiahana ranon-javatra avy amin'ny singa mifehy dia miditra amin'ny sisin'ny akoran'ny etona ary manala ny hafanana amin'ny vahaolana. Rehefa esorina ny hafanana, ny rano sasany dia mivaingana amin'ny vahaolana ka mamoaka ranomandry izay mety hidina ao anaty tanky na hoentina any amin'ny fitoeran-drano. Hamboarina ny ranomandry ary hatolotra avy eo an-tampon'ny tanky, ary ny vahaolana dia mifantoka amin'ny fivoahana avy any ambanin'ny tanky araka izay ilaina.
Ampiasaina ny masinin-dranomandry slurry?
(1) Ny masinin-dranomandry slurry dia mamokatra ny ranomandry slurry malefaka ho an'ny fitahirizana hatsiaka avy amin'ny hazan-dranomasina
(2) Ny milina ranomandry slurry ny ranomandry mikoriana azy dia azo ampiasaina amin'ny fikarakarana akoho amam-borona.
(3) Ny milina ranomandry slurry dia azo apetraka ho an'ny gilasy fampiasana supermarket
(4) Ny milina ranomandry slurry dia azo ampitaina amin'ny fivarotana fivarotana mofo.
(5) Ny milina ranomandry slurry dia azo ampiasaina amin'ny rafitra HVAC lehibe ao anaty trano
(6) Ny milina ranomandry slurry dia ampiharina amin'ny fikarakarana sakafo sy ronono
(7) Ny milina ranomandry slurry dia azo ampiasaina amin'ny fampangatsiahana beton
(8) Ny rafitra milina ranomandry slurry koa dia azo ampiasaina amin'ny fampangatsiahana vata fampangatsiahana.
Ny tombotsoantsika amin'ny milina ranomandry slurry?
1.Fahombiazana angovo mahery vaika
Ny ranomandry slurry novokarin'ny mpamorona ranomandry slurry dia tsy manaraka ny velaran'ny famindrana hafanana, izay miteraka fahombiazan'ny angovo avo kokoa.
Ity masinin-dranomandry slurry ity dia ny tapakila evaporatorany kely dia manolotra tahiry habaka ao amin'ny efitrano fampiasa amin'ny vata fampangatsiahana.
3. Fikojakojana kely
Tsy misy famindrana hafanana, etona azo antoka kokoa
Ny endri-javatra amin'ny milina ranon-tsakay?
1. Mitsitsia amin'ny fitehirizana fanatsarana:
Ny krystaly ranomandry maloto dia miforona ao anaty ala mikitroka mafy, mamorona kristaly kely boribory izay mora amin'ny vokatra ary misoroka ny lokon'ny volony, tsy toy ny ranomandry flake, ranomandry akorandriaka na ranomandry vaky izay misy sisiny mihorakoraka. Ankoatr'izay, ny ranomandry slurry dia mitazona ny mari-pana fototra ambany kokoa sy lava kokoa noho ny ranomandry flake
2. Mitsitsia amin'ny fahombiazan'ny angovo:
Miaraka amin'ny coefficient ny fahombiazan'ny evaporator dia mametraka ny lisitra ho an'ny fahombiazan'ny angovo. manana mari-pana hisotro avo be hatrany amin'ny -8.8 ° C, mamokatra vata fampangatsiahana 1 taonina amin'ny fampiasana angovo 1 ~ 1.2 kW.
3. Mitsitsia amin'ny fizarana ranomandry mora sy mahomby:
Ny famafana ny ranon-dranomandry mivantana amin'ny teboka fampiasana dia miantoka ny fidiovana avo lenta ary mampihena ny asa amin'ny fanolorana sy fanadiovana ny ranomandry.
4. Mitsitsia amin'ny System Design Flexibility:
Ireo fonosana maoderina madinidinika dia manana dian-tongotra kely dia kely, indrindra eo amin'ny fampiharana fahaiza-manao lehibe, manome ny vahaolana mety indrindra amin'ny tetikasa fanavaozana / fanitarana. Mitsitsia toerana ao amin'ireo efitrano mekanika be olona amin'ny alàlan'ny fitadiavana fonosana condensing sy / na tanky fitehirizana ranomandry any amin'ny toerana lavitra
Ny vokatra asehonay vita amin'ny milina ranomandry slurry
Milina ranomandry slurry dia mamokatra ranomandry slurry avo lenta ho an'ny fampiharana fampangatsiahana isan-karazany:
Fampisehoana horonan-tsary milina maloto
Previous: Free sample for Air To Air Plate Heat Exchanger - Fiber Laser Welded Pillow Plate Heat Exchanger – Chemequip Industries Co., Ltd.
Manaraka: Fahombiazana avo lenta -gas hafanana mpanamboatra hafanana vita amin'ny takelaka ondana
Masinina ranomandry slurry ara-barotra
Masinina ranomandry mikoriana
Milina ranomandry mikoriana ho an'ny fampangatsiahana sakafo
Masinina ranomandry slurry avo lenta
Masinina fitaratra ranomandry
Masinina ranomandry slurry indostrialy
Masinina ranomandry ranoka
Masinina ranomandry misy ranoka ho an'ny hazan-dranomasina
Masinina fanaovana ranomandry ranon-javatra mba hampangatsiaka
Masinina mihodina ranomainty ny evaporatera
Masinina ranomandry slurry Sina
Masinina ranomandry slurry ho an'ny fampangatsiahana beton
Masinina ranomandry masira ho an'ny HVAC
Masinina ranomandry masira ho an'ny fampangatsiahana hazan-dranomasina
Masinina ranomandry slurry ho an'ny supermarket vaovao
Mpanamboatra milina ranomandry maloto
Masinina fanaovana ranomandry slurry
Masinina famokarana ranomandry maloto
Lozam-pifamoivoizana avo lenta avo lenta hafanana hafanana ...
Masinina ranomandry slurry ara-barotra, Laser welded lovia ranomandry milina , Chiller labiera amin'ny ranomandry, Stainless vy Dimple palitao , Masinina ranomandry slurry indostrialy, Masinina ranomandry ranoka,